Olee otú Hichapụ Your iPhone Tupu-ere ya
Part 1.Why mkpa ehichapụkwa gị iPhone tupu ere ya
Part 2.How na-ehichapụ gị iPhone tupu ere ya
Part 3.Poll: Gịnị ị na-emekarị ime tupu ere gị iPhone
Part 1. Gịnị mere mkpa ehichapụkwa gị iPhone tupu ere ya
Ị na nwere gị mma ochie iPhone na ị afọ ugbu a, na oge emesịala bịa n'ihi na ị na-ere ya. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-ahụ ka o kwesịrị ekwesị inye pụọ gị iPhone onye. N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, ị na-enye efep gị ochie iPhone na ị ga-ehichapụkwa anya niile nke gị data tupu eme otú ahụ.
Olileanya, na ị bụghị otu n'ime ndị na-eche ihe mere na ị kwesịrị ị na hichapụ ihe niile gị data. Ọ dịghị onye kwesịrị ịhụ onwe gị foto, ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ faịlụ. Na, kasị bụrụ dịruru ná njọ bụ, ọ bụrụ na gị data adaghị ọjọọ aka ya ike ga-eji megide unu. Ka ihe atụ, ị nwere ike ụlọ ahịa Koodu PIN gị kaadị, ma ọ bụ ma eleghị anya, ụlọ gị mkpu na ekwentị gị. Ga-amasị gị onye ọzọ ka nwere ya?
Ọ bụ ya mere ọ dị oké mkpa ihichapu niile nke data gị iPhone. Ọtụtụ ndị na-eche na nke a bụ nnọọ mfe, ị dị nnọọ aga Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala. (Tupu-eme nke a, cheta na i kwesịrị pụọ nke iCloud na ndị ọzọ na ọrụ ndị dị ka iMessage na Apple ID). Eziokwu-ehichapụ gị data bụghị na mfe. Ọbụna mgbe erasing niile nke gị ọdịnaya aka na Iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala, gị data ka nwere ike na-Ewepụtara. Kedu? Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji software, dị ka Wondershare SafeEraser, iji jide n'aka na niile nke gị data e ehichapụ-adịgide adịgide.
Part 2. Olee na-ehichapụ gị iPhone tupu ere ya
Wondershare SafeEraser bụ ngwá ọrụ nke dị ma Windows na Mac kọmputa. Ọ na-enyere gị aka na-adịgide adịgide ihichapu data gị iPhone ma na-echebe niile nke gị data mgbe ere ma ọ bụ enye efep ngwaọrụ gị. Wondershare SafeEraser bụ dakọtara na ọhụrụ version nke iOS, na ọhụrụ iPhones, dị ka iPhone 6 na iPhone 6 Plus.
Dị ka US Department nke ikpe ziri ezi, otu onye n'ime mmadụ iri nwere bụ a aja njirimara-ezu ohi. Na nri ngwaọrụ, niile nke gị ehichapụ data, dị ka ozi, ichekwa ego na bank informations, mkpa ndetu, wdg nwere ike gbakee. Ihichapụ faịlụ naanị ewepu na n'ụzọ na-eduga na ọmụma, ma data ka mụ n'ebe ahụ, dị maka mgbake. Gịnị SafeEraser eme bụ na a na software ana achi achi niile nke gị data na-na-adịgide adịgide ehichapu, gụnyere data i nwere ike chefuo banyere, dị ka Safari nchọgharị akụkọ ihe mere na kuki. Site n'ime otú ahụ, Wondershare SafeEraser ana achi achi na gị ehichapụ data tọrọ ehichapụ ihe ọma.
Nke a ọkachamara data mbibi na-akwado ihichapụ ndị na-esonụ faịlụ na data: Ozi, oku History, Facetime, kọntaktị, Mail, Kalinda, Nchetara, Edeturu, Voice Memos, Safari ibe edokọbara, Photos, Videos, ngwa ọdịnala, System Ntọala, Keyboard Cache, Passbook, iTunes dB, iMessage, Safari ọkacha mmasị, Safari History, oziolu, Apple ID, iCloud ID, Game Center, Apple Maps, Weather, ebuka, ọdụ akwụkwọ akụkọ.
Erasing data kwuru n'elu bụ ka a ezi echiche, ọbụna mgbe ị na ịzụta gị ọhụrụ ekwentị, bụrụ na ị hapụ ya, ma ọ bụ onye ezuru ya n'aka gị.
Ihe kacha mma banyere Wondershare SafeEraser bụ na usoro a nwere ike mere na nanị otu click, na gị data na-ehichapụ na oge. Ebe a bụ otú.
1. Open Wondershare SafeEraser ma họrọ ihichapu niile Data ke akpan window.
2. Mgbe ahụ, software ga-eme a nche ego, dị nnọọ bụrụ. Pịnye 'ihichapụ' iji gosi na gị iji na anọgide na-eji erasing usoro.
3. Mgbe erasing usoro amalite, eme ka n'aka gị iPhone-anọ na njikọ dum oge. Otú a ị ga-n'aka na niile nke gị data na-ehichapụ-adịgide adịgide.
4. Ozugbo Ihichapụ usoro a mere, ị ga-ahụ ngosi na usoro na dechara.
Na na bụ ya!
Erasing data site na ekwentị gị tupu ere ya, ga-abụ ga maka gị. Ị dịghị mara ndị nwere ike na-jide ekwentị gị na otú onye ahụ nwere ike eme iberiibe onwe gị data. Na kasị bụrụ dịruru ná njọ, ị pụrụ ọbụna a aja njirimara-ezu ohi.
Ya mere, tupu ị na-ere ekwentị gị na e nwere ihe anọ ị pụrụ ime. Ị pụrụ ịhapụ gị niile data na ekwentị gị, nke bụ ihe incredibly elu n'ihe ize ndụ. Dịghị onye maara onye wee na jide gị data. Mgbe ahụ, i nwere ike iji aka hichapụ gị data, ma nke ahụ abụghị a smart nhọrọ. Mgbe ị na aka ihichapu gị data, data bụ ka dị maka mgbake. Otú ọ dị, a nhọrọ bụ a bit odi mfe karịa bụghị ihichapụ gị data mgbe niile. Nke atọ nhọrọ ga-iji tọgharịa ekwentị gị na ụlọ ọrụ ntọala. A nhọrọ bụ ndị kasị dịrị nchebe otu tụnyere ndị gara aga abụọ. Otú ọ dị, na ogwe aka nke onye na-maara ihe ọ / ọ na-achọ, na data ka nwere ike na-gbakee. Na, na njedebe, ndị kasị dịrị nchebe nhọrọ ga-ihichapụ gị data na-adịgide adịgide na juputara na a ọkachamara data mbibi, dị ka Wondershare SafeEraser. A nhọrọ bụ ndị kasị dịrị nchebe nhọrọ maka ihichapụ gị data, na e nweghị ụzọ naghachi ihe ọ bụla mgbe iji Wondershare SafeEraser.
Part 3. Nghoputa: Olee ị na-emekarị ime tupu ere gị iPhone
Ya mere, tupu ere gị iPhone, ihe ị ga-eme?
a) ehichapụkwala data na niile (Kemgwucha elu n'ihe ize ndụ)
b) Hichapụ niile data gị iPhone aka (Nnọọ elu n'ihe ize ndụ)
c) Tọgharia gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube (ize ndụ, Data ka pụrụ ịdị Natara)
d) Zuru-ebibi ndị niile data na gị iPhone na a ọkachamara ngwá ọrụ dị ka Wondershare SafeEraser (Nchekwa)
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ Your iPhone Tupu-ere ya